Video: Youtube Video mgbanwe 2.0 | Martech Zone
Amaghị m banyere gị, mana m na-amalite ịhụ otutu ihe mgbasa ozi na Youtube. Ka vidiyo na-adịwanye ọnụ na mmetụta, ọ dị ka atụmatụ ahịa ọ bụla kwesịrị itinye ya. Vidio dị ezigbo iche na ọ na-erute onye ọ bụla. Ọ bụghị mmadụ niile na-agụ, mana onye ọ bụla na-ekiri. Na tinye Youtube na ihe ikpo okwu ọ bụla ejikọrọ, ọ nweghị ụzọ ị na-anaghị ekiri vidiyo Youtube.
Maka ndị ahịa, mmetụta nke mgbasa ozi na vidiyo dị mkpa na-aga n'ihu na-ebili… yabụ na ị gaghị aga nweta onye na-ese foto naanị (ọ bụ ezie na m ka ga-akwado ya!). Ọ dị ka ụlọ ọrụ ahụ arụla ọrụ dị ukwuu n'iji nwayọ na-emejuputa mgbasa ozi vidiyo ogologo na ogologo na mgbasa ozi popover. Elere m mgbasa ozi nkeji 2 n'ụbọchị nke ọzọ na otu vidiyo! Ọtụtụ mgbe, m na-elele ngụda "Kwụsị mgbasa ozi a", agbanyeghị.
Gbalia ibudata Youtube Traffic Report gi site na Reel Marketing Insider.
Tags: infographic vidiyoahịa vidiyoyoutubesteti youtube
Mee ka Echiche Youtube
Daalụ maka ozi gị.Ọ ga-amasị m ịkọrọ gbasara ọrụ mmekọrịta mmekọrịta ọkachasị maka youtube. Debe ezigbo ọrụ na blog.